လက်ဆေးရင်းနဲ့ လုပ်မိတတ်တဲ့ အမှား ၆မျိုး - Hello Sayarwon
လက်ဆေးရင်းနဲ့ လုပ်မိတတ်တဲ့ အမှား ၆မျိုး
Dr. Thiha Phyo Myint မှ ရေးသားသည်။ 31/05/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း COVID – 19 ကို ကာကွယ်နိုင်သော ကာကွယ်ဆေး၊ ပိုးကိုတိုက်ရိုက်သေစေနိုင်သော ပိုးသတ်ဆေးတွေဟာ ယနေ့ထိ ကမ္ဘာမှာ စမ်းသပ်ဆဲအဆင့်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ အလျင်အမြန် ကူးစက်‌နေတဲ့ COVID – 19 ရန်က လွတ်မြောက်ဖို့ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းဟာ ရောဂါပိုး မကူးစက်‌အောင် ကာကွယ်ခြင်းပါပဲ။ ကာကွယ်ခြင်းနည်းလမ်းများစွာထဲကမှ အထိရောက်ဆုံးနဲ့ အလွယ်ကူဆုံးဟာ လက်ဆေးခြင်းပါ။ အခြားကာကွယ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကတော့ social distancing -ခပ်ခွာခွာနေခြင်း(၆ပေအကွာ)၊ mask တပ်ခြင်း နဲ့ ထိတွေ့ကိုင်တွယ်မှုများသော မျက်နှာပြင်များကို ပိုးသန့်စင်ခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ လက်ဆေးခြင်းက လူတိုင်းအလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး အင်မတန်မှလည်း အရေးကြီးတာကြောင့် နည်းစနစ်တကျမှန်ကန်စွာ ဆေးကြောတတ်ဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။ လက်ကို စနစ်တကျမှန်ကန်စွာ ဆေးကြောနေကြပါရဲ့လား။ ပိုးတကယ်ကင်းစင်သွားနိုင်အောင် ဆေးတာလား။ အဖြစ်သဘောမျိုးပဲ ဆေးမိလိုက်တာလား။ သတိမထားလိုက်မိဘဲ မှားတတ်တဲ့ အမှားလေးတွေကြောင့် လက်တော့ဆေးပါရဲ့၊ ပိုးမကင်းစင်သွားဘူးဆိုတဲ့ အဖြစ်မျိုးမဖြစ်ရလေအောင် လက်ဆေးရင် မှားတတ်တဲ့ အမှား ၆ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁. လက်ကို မကြာခဏ မဆေးမိခြင်း။
နေ့တစ်နေ့တာမှာ လက်ချောင်းလေးတွေဟာ အရာဝတ္ထုပေါင်းစုံနဲ့ ထိတွေ့ကိုင်တွယ်မိတတ်ပါတယ်။ လွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့ မိမိလက်နဲ့ မိမိရဲ့ မျက်နှာကို မကိုင်ခင် အထူးသဖြင့် မျက်စိ၊ နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်တို့ကို မကိုင်ခင်နဲ့ ဘယ်အရာဝတ္ထုကိုမဆို ကိုင်တွယ်ပြီးတိုင်း လက်ကို ရေနဲ့ဆပ်ပြာ သို့မဟုတ် အရက်ပြန် ၆၀% အနည်းဆုံးပါဝင်တဲ့ လက်သန့်ဆေးရည်နဲ့ ဆေးဖို့လိုပါတယ်။
ရေအေးနဲ့ပဲ ဆေးဆေး ရေနွေးနဲ့ပဲ ဆေးဆေး အမြှုပ်ထွက်နိုင်တဲ့ အထိ ဆပ်ပြာကို လုံလုံလောက်လောက်သုံးပါ။ လက်မှာကပ်တွယ်နေတဲ့ အဆီ၊ အညစ်အကြေး နဲ့ ပိုးမွှားတွေအထိဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက် အမြှုပ်ထတဲ့ ပွတ်တိုက်ဆေးကြောပေးဖို့လိုပါတယ်။
၃. လက်တစ်ခုလုံး နေရာနှံ့အောင် မဆေးမိခြင်း
“ဖဝါး၊ ဖမိုး၊ လက်ခေါက်ချိုး၊ လက်ကြား၊ လက်မ မကျန်ရ၊ ကုတ်၍ခြစ်ပါ လက္ခဏာ၊ လက်ကောက်ဝတ်မှာ အဆုံးသတ်ပါ” ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးအတိုင်း လက်ရဲ့နေရာအနှံ့ကို ဆေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ယခုလို ရောဂါပိုးမွှားတွေ ထူပြောနေချိန်မှာ လက်သည်းအရှည်မထားသင့်ပါဘူး။ လက်သည်းအောက်မှာ ပိုးမွှားတွေ ကပ်ကျန်ခဲ့နိုင်လို့ပါ။
၄. လက်ကို စက္ကန့် ၂၀ ကြာအောင် မဆေးမိခြင်း။
လက်မှာ ကပ်တွယ်နေတဲ့ ရောဂါပိုးမွှားတွေ ကင်းစင်ဖို့အတွက် အနည်းဆုံး စက္ကန့် ၂၀ ကြာအောင် လက်ကို ပွတ်တိုက်ဆေးကြောပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ကလေးများ ကိုယ်တိုင်‌လက်ဆေးတဲ့ အခါ Timing မှတ်ရလွယ်အောင် “Happy Birthday” မွေးနေ့ဆုတောင်းသီချင်းကို ၂ခေါက်ရွတ်ပြီးဆေးခိုင်းတာမျိုး လေ့ကျင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၅. လက်ကို‌ရေနှင့် စင်ကြယ်စွာ မဆေးမိခြင်း
လက်ကို ဆပ်ပြာနဲ့ အမြှုပ်ထွက်အောင် ပွတ်တိုက်ဆေးပြီးနောက်မှာ ဆပ်ပြာကင်းစင်တဲ့အထိ ရေနဲ့ ပြန်လည်ဆေးကြောဖို့လည်း အရေးပါတယ်။
၆. လက်ကို အခြောက်မခံမိခြင်း။
လက်အစိုမှာ ရောဂါပိုးတွေဟာ ပိုမို ပျော်မွေ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ လက်ဆေးပြီးတိုင်း လက်ကို ခြောက်သွေ့အောင် လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ မိမိရဲ့နေအိမ်မှာ ဆိုရင်တော့ သန့်ရှင်းတဲ့ hand towel နဲ့ ရေခြောက်အောင် သုတ်ပေးပါ။ အများပြည်သူသုံးသန့်စင်ခန်းလိုမျိုးမှာဆိုရင်တော့ electric hand dryer ထက် tissue စက္ကူသုံးပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
လက်ကို နည်းစနစ်တကျ ဆေးကြောပြီး Covid19 သာမက ရောဂါပိုးပေါင်းစုံ ကူးစက်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ကြပါစေ။
ရေးသားသူ – Dr. Saint